IFrance isiza inkampani yezindiza entsha yaseCaledonia
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » IFrance isiza inkampani yezindiza entsha yaseCaledonia
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • France Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha ZaseCaledonia • Izindaba • Transportation
Inkampani yezindiza yaseFrance-izinsiza-New-Caledonia
Inkampani yezindiza yamazwe ngamazwe yaseNew Caledonia inikezwe isaphulelo sentela yiFrance ukuze ithenge izindiza ezimbili ezintsha ze-Airbus.
IKhomishini Ephakeme YaseFrance eNoumea ithi ungqongqoshe wezomnotho nezezimali ugunyaze imvume yokuthengwa kwezindiza ezimbili ze-Airbus A330-900neo, okulindeleke ukuthi zilethwe ngoMeyi.
Isitatimende asisho ukuthi inkampani yezindiza iyongiwe malini.
Ithi lokhu kusekelwa kuzosiza i-AirCalin ukuthi ithuthukise imisebenzi yayo, kungaba okokuvakasha noma ukukhishwa kwezokwelapha.
Isitatimende sithi lokhu futhi kuwuphawu lokweseka kombuso waseFrance inkampani yezindiza kanye neNew Caledonia.
I-AirCalin indizela ezindaweni e-Pacific futhi inikeza isevisi e-Japan ukuze ixhumanise abagibeli abasuka noma baya e-France.